loo isticmaalo sifooyinka wax lagu kala iibsado ee alaabada dhoobada kulul, qaybaha gaarka ah ee heerkulka, qalabka dhoobada isku dhafan, oo ka samaysan qalabka kululeeyaha ee PTC iyo alaabada PTC oo dabacsan, daboolka faakiyuumku waa sheyga ugu muhiimsan ee uumi baxa doonta iyo aluminium qalabka koronto aluminium elektiroonigga ah.
Caanaha molecular TIB2
Lambarka CAS 12006-80-3
Sifooyinka qalin budo bir cawl ah
Barta dhalaalida 2980 "C
Nacasnimo 4.52 g / cm3
Isticmaala loo adeegsaday sifooyinka la adeegsado ee alaabada dhoobada kulul, / qaybaha qaaska ah ee gtempe, qalabka dhoobada isku dhafan, oo laga sameeyay qalabka kululeeyaha ee PTC iyo qalabka PTC oo dabacsan, daboolka faakiyuunka ayaa ah walxaha ugu muhiimsan ee uumiga doonta iyo aluminiumka qalabka elektaroonigga ah ee aluminium.
barta dhalaalida: 2900-3225 ° C
cufnaanta; 4.52 g / ml at 25 ℃ (shiday)
adag ee hydrogen peroxide iyo sulfuric acid
Shayga waa cufan laba geesle ah oo cufkiisu yahay 4.50 iyo barta dhalaalaysa 2900 ting. Waxay leedahay adkaansho iyo xoog sare, iska caabin kuleylka wanaagsan ee kuleylka, iska caabinta korantada oo hooseysa mana sahlana in lagu nuujiyo biraha la shubay.
Budada waxaa loo isticmaalaa biiyaha gantaalka, xiriirka korantada iyo qalabka koronto heerkulka sare, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sidii loo xoqin lahaa.; dhoobada tabinta, dhoobada qalabka, isticmaalka lakabka u adkaysta tabinta isticmaalka V; walxaha isku dhafan. nitride tabinta (steamboat), oo lagu soo saaray titoria diboride (TiB2) iyo boron nitride (BN), waa qaybta ugu weyn ee qalabka fayadhawrka faakuumka ah. Qalabka dhoobada dhoobada iyo qaybaha. Titanium diboride dhoobada waxaa loo soo saaray siligga sawirkiisa dhinto, u dhinto extrusion, nozzles sandblasting, walxaha qufulka, qalabka goynta, iwm Qalabka dhoobada isku dhafan. Titanium diboride waxaa loo isticmaali karaa inay tahay qayb muhiim ah oo ka kooban waxyaabo isku dhafan oo ka kooban qaybo badan. Titanium diboride waxaa loo isticmaali karaa sida qalab jarista qalabka wax isku dhafan oo leh tic, tin, SiC iyo qalab kale. Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inay ka mid tahay waxyaabaha ka samaysan ilaalinta hubka. Waa sheyga ugu fiican qaybaha kala duwan ee heerkulka sare iyo aaladaha shaqeynaya. Qalabka Cathode ee aluminium koronto.
Waa loo isticmaali karaa Maaddaama maadada cathode ee unugga yareynta aluminiumku, TiB2 ay leedahay qoyaan fiican oo leh aluminium la shubay, taas oo yareyneysa isticmaalka awoodda aluminium elektaroonigga ah waxayna sii dheereyneysaa nolosha unugyada elektroolka ah.
Waxa kale oo laga samayn karaa maaddada kululaynta PTC iyo qalabka PTC oo jilicsan, taas oo ah wakiilka xoojinta A1, Fe, Cu iyo qalabka kale ee birta ah. Codsiga: waxaa loo isticmaalay biiyaha gantaalka, xiriirka korantada, qalabka korantada; habka boron carbide, sidoo kale loo yaqaan habka yareynta carbothermal, waxaa lagu diyaarin karaa iyadoo la adeegsanayo TiCl4 iyo BCl3 sida alaabta ceyriinka ah, iyadoo la raacayo xaaladda H2, heerkulka dhigaalka waa 800 ~ 1000 ℃, TiCl4 + 2bcl3 + 5h2 = TiB2 + 10hcl, codsi ku saabsan millatariga iyo alaabada heerka korontada.
Hore: Budada Zirconium budada, ZrB2
Xiga: Budada Chromium budada, CrB2
Warshad budada budada ah ee Titanium Boride
saaraha saaraha budada ah Titanium Boride
Warshadaha budada ah ee Titanium boride
Warshadda budada ah ee Titanium boride
Soosaarayaasha budada ah ee Titanium
Titanium boride budada Qiimaha